Ilaah ma runbaa? Sidee ayaan si xaqiiq ah ugu ogaanayaa in Ilaahey uu run yahay?
Su’aal: Ilaah ma runbaa? Sidee ayaan si xaqiiq ah ugu ogaanayaa in Ilaahey uu run yahay?
Jawaab: Waan ognahay in Ilaahey uu dhab yahay sababtoo ah sedex waddo ayuu isugu keen muujiyay Isaga: abuurida, Erayadiisa, iyo Wiilkiisa, Ciise Masiixi.
Cadeynta aasaaska jiritaanka Ilaahey ee ugu muhiimsan iyadoo sahlan waa waxa uu sameeyay. “Ka soo bilaw aasaaska aduunka ee tayada Ilaaheey ee aan la arki karin—awoodiisa daa’imka ah iyo dabiiciga rabaaniga—si cad ayaa loo arkay, fahamka waxa la sameeyay, si markaas aadanaha uusan u marmarsiyoonin” (Rooma 1:20). “Samadaha shaaca ayay ka qaadaa ammaanta Ilaahey; cirka wuu ogeysiiyay shaqada gacmahiisa.” (Sabuuradii 19:1).
Waxaan meel aan la garaneynin ka helay saacada gacanta, ma ahan in aan u qiyaaso in ay ka soo “muuqatay” meel aan lagaraneyn ama marwalba way jirtay. Sida ku saleysan naqshada saacada, waxaan qiyaasayaa in ay leedahay naqshadeeye. Laakin waxaa jira naqshad ka fog oo weyn oo sax ka ah ee aduunka inaga nagu wareegsan. Xisaabteena ee waqtiga kuma saleysno saacada gacanta, laakin shaqada gacanta ee Ilaahey—wareega joogtada ah ee dhulka (iyo sifooyinka shucaaca ee kiimakada-133 muhiimka ah). Aduunka wuxuu muujiyaa naqshad heer sareyso, iyo tani waxay ku murantaa Naqshadeeye Weyn.
Haddii aan helo fariin warbixin ah, waxaan raadin lahaa sirta lagu furo ee igu caawiso jabinta sirta. Qiyaasteyda waxay noqoneysaa in aysan jirin diraa caaqil ah ee fariinta, ee qofka aasaasay sirta. Siduu u adagyahay DNA “sirta” ee aan ku qaadno unug walbo ee jirkeena ah? Maku muruno adkaanta iyo ujeedada DNA Qoraaga Caaqilka ah ee sirta?
Ma ahan kaliya in uu Ilaahey sameeyo sir iyo aduunka qaab ahaan si wanaagsan u wareegsan; Waxaa sidoo kale fajac ah micnaha daa’inka qalbiga qof walba (Wacdiyadii 3:11). Aadanaha wuxuu leeyahay aragti la dhalin ah oo in ay jiraan nolol badan ee aan lakulmin isha, taasi oo ah in ay jirto in ay ka sareyso inta dhulka uu soo wareegto. Dareenkeena daa’inka muuqato lafteeda ee ugu yaraan labo waddo: sharci sameynta iyo cibaadada.
Ilbaxnima walba oo taariiqda oo dhan ah waxay leedahay sharciyo qiimeeyo anshaxa qaarkood, taas oo si layaab leh ula mid ah dhaqanba dhaqan. Tusaale, fikrada jaceylka guud ahaan waa mid qiima leh, iyadoo dhaqanka beenta guud ahaan qiima badan. Dareenkaan guud—fahamka aduunkaan ee sax iyo qalad—waxay tilmaameysaa Ahaanshaha Dareen Sareeyo oo ah qofka nasiiyay muran noocaas ah.
Oo isku mid ah, dadka aduunka oo dhan, oo aan laga eegin dhaqanka, marwalbo waxay beeraan qaab cibaadeysi ah. Sheeyga cibaadada laga yaabo in ay ka duwanaato, laakin dareenka “awooda sareyso” waa wax aan la diidi karin ka qeyb ahaanshaha aadanaha. Janjeerideena ee cibaadada sida waafaqsan arin ah in Ilaahey naga abuuray “Muuqaalkiisa” (Bilowgii 1:27).
Ilaahey sidoo kale wuu iskeen tusiiyay dhinaca Eraygiisa, Baaybalka. Kitaabada oo dhan, jiritaanka Ilaahey waxaa lagu tilmaamaa sida runta marqaatiga-shaqsiga (Bilowgii 1:1; Baxniintii 3:14). Goortii Benjamin Franklin uu qoray buugiisa, waqti kuma uusan lumin isku dayga cadeynta jiritaankiisa gaarka ah. Sidoo kale, Ilaahey kuma isticmaalo waqti badan cadeynta Jiritaankiisa ee Buugiisa. Dabiiciga isbedelka nolosha ee Baaybalka, waa daacadnimada, iyo mucjisooyinka ee ay lajiraan qoraalkiisa waa in ay ku filnaataa in laga xaqiijiyo aragti dhaw.
Waddada sedexaad ee Ilaahey uu usu keen sheegay isaga waa dhinaca Wiilkiisa, Ciise Masiixi (Yooxanaa 14:6-11). “Bilawga wuxuu ahaa Erayga: Erayga wuxuu la jiray Erayga Ilaahey, iyo Erayga wuxuu ahaa Ilaahey. Erayga wuxuu noqday dhiig iyo laga sameeyay deegaan inaga naga mid ah. Waxaan aragnay ammaantiisa, ammaan ta Halka iyo Kaliga ah, kaas oo kayimid Aabaha, naxariis badan iyo run” (Colossians 2:9).
Layaabka nolosha Ciise’, Wuxuu hayay sharciga Axdigii Hore oo dhan si wanaagsan u dhameystiray nabiyada la xiriira Masiixiga (Matayos 5:17). Wuxuu sameeyay dhaqamo aan xisaab laheyn ee naxariista iyo mucjisooyinka bulshada ee xaqiijinta Fariintiisa iyo marqati laga noqdo ilaahinimadiisa (Yooxanaa 21:24-25). Kadib, sedex maalin dilkiisa kadib, dhimashada ayuu ka soo Kacay, arin saxan ee boqolaal marqaati ah (1 Korintos 15:6). Diiwaanka taariiqiga ah wuxuu layimid “cadeyn” oo Ciise waa. Sida Rasuulka Paul uu yiri, waxaan “laguma sameynin dhinac” (Falimaha Rasuulada 26:26).
Waxaan ogaanay in ay marwalba jirayaan falaago wataan fikradooda gooniga ah ee la xiriiro Ilaahey iyo waxay aqrinayaan cadeynta waafaqsan. Iyo waxaa jiraya qaar wata tiro cadeyn ah aaminaya (Sabuuradii 14:1). Kuligood waxay u soo dageen rumeysiga (Cibraaniyada 11:6).